गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा: कहिले देखि हुँदैछ उडान ? | suryakhabar.com
Home पर्यटन/संस्कृति गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा: कहिले देखि हुँदैछ उडान ?
गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा: कहिले देखि हुँदैछ उडान ?
on: ६ मंसिर २०७५, बिहीबार १५:४२ In: पर्यटन/संस्कृतिTags: No Comments
भैरहवा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा अगाडि बढिरहेको छ । हाल विमानस्थलको धावनमार्गमा धमाधम कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । सो विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार करीब एक किमी धावनमार्गमा पहिलो चरणको कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । यही गतिमा काम भएको खण्डमा आगामी ४५ दिनभित्र पहिलो चरणको कालोपत्रे काम सकिनेछ । धावनमार्गमा तीन तहको कालोपत्रे गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो चरणको काम सकिएपछि क्रमशः दोस्रो र तेस्रो चरणको कालोपत्रे गर्न १५/१५ दिनको समय लाग्नेछ ।
सन् २०१९ को जुन २८ सम्म सञ्चालन योग्य बनाउने गरी काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाको प्रगति न्यून र आशातीत रुपमा राम्रो नभइरहेको अवस्थामा गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम लोभलाग्दो तवरले भइरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले दैनिकजसो नै विमानस्थल निर्माणको प्रगतिबारेमा जानकारी लिने र समस्या आए समाधान पनि तत्काल नै गर्ने भएका छन् ।
स्थलगत निरीक्षणका लागि बुधबार विमानस्थल पुग्नुभएका मन्त्री अधिकारीले आयोजना प्रमुख अधिकारीलाई सोध्य, “समस्या के छ, अहिल्यै भनी हाल्नुस् ।” आयोजना प्रमुखले तत्काल खासै समस्या छैन भन्दै विमानस्थल निर्माणको प्रगतिबारेमा जानकारी गराए । आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, “सामान्य रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन केही रकमको अभाव छ, अरु त सबै काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ ।”
कूल तीन हजार मिटर लामो धावन मार्गको कालोपत्रे सकिएपछि आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत माथि पुग्ने दाबी गर्दै आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, “सरकारको चासो, राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा पनि हामी तोकिएको समयअगावै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्छौं ।”
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको गौतमबुद्ध विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण अघि बढाइएको र कुनै पनि समस्या हुन नदिइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । “हामीले नियमित अनुगमन गरिरहेका छौँ, सामान्यदेखि जटिल समस्यासमेत समाधान गरिएको छ, आयोजना, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा अन्य सरोकार भएका सबै निकायलाई पनि उत्तिकै परिचालन गरिएको छ । आशा गरौँ, आगामी जेठभित्र सो विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ ।”
आयोजनाका लागि थप ५०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । हालसम्म अधिग्रहण गर्न रु १० अर्ब खर्च भइसकेको छ । बाँकी अधिग्रहणका लागि रु ११ अर्ब चाहिनेछ । सञ्चालनमा रहेको धावनमार्गलाई पार्किङस्थल बनाएर निर्माणाधीन धावनमार्ग नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । सन् २०१९ सम्ममा त्यहाँबाट अन्य गन्तव्यमा समेत उडान गरिनेछ ।
निर्माण व्यवसायी चिनियाँ कम्पनी ग्रुपका परियोजना निर्देशक सुइले पनि विमानस्थल निर्माणमा कुनै पनि समस्या हुन नदिन आफूहरु प्रयत्नशील रहेको र तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गरिने जानकारी दिए । “हामी प्रयत्नशील छौँ, सबै प्रकारको क्षमताको उपयोग गरेका छौँ, प्रगति असाध्यै राम्रो भइरहेको छ । यो काम मात्रै होइन नेपाल चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउने अभिभारा पनि हो” सुइले भने ।
भैरहवा विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै क्षमतामा सञ्चालनमा आउनेछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वार्षिक ७० लाख यात्रु क्षमता रहेको छ । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न र भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई थप प्रवद्र्धन गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ ।
६ मंसिर २०७५, बिहीबार १५:४२